माेदीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल: लाेकसभामा राहुल गान्धीको चर्तिकला – Everest Dainik – News from Nepal
माेदीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल: लाेकसभामा राहुल गान्धीको चर्तिकला
नयाँदिल्ली, साउन ४ । भारतीय लोकसभामा शुक्रबारदेखि मोदी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल शुरु भएको छ ।
छलफलका दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले साँसदहरुलाई आचाश्र्य चकित पारेका छन् । ४८ मिनेटमा लामो भाषण सकेपछि राहुल आफूनो स्थानबाट उठेर सत्तापक्षको लबीमा पहिलो लाइनमा बसेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अकंमाल गरे ।
यो देखेर सदनमा उपस्थित सबै सांसद आश्चर्य चकित भए । त्यसमा प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिक्रिया पनि कम चमत्कारीक थिइन । जब राहुल अकंमाल गरेर फर्किदै थिए, मोदीले उनलाई बोलाएर पीठमा धाप मारे ।
त्यसअघि राहुलले आफ्नो भाषणमा केही यस्ता विषय उठाएका थिए जसले सदनमा हासोको फोरा छुट्को थियो । एक पटक उनले ‘बाहिर’ को ठाउँमा ‘बार’ शब्दको प्रयोग गरे । एक पटक भनिदिए, ‘तपाईहरुका लागि म पप्पू हुँ । फेरि उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मेरो आखाँका सिधा हुर्न सक्दैनन् ।’
राहुलको भाषणका क्रममा मोदी र सभामुख सुमित्रा महाजन पनि कयौं पटक मुस्कुराएका थिए । पछि भनियो कि सभामुख राहुलको उक्त व्यवहारप्रति असन्तुष्ट छन् । सभामुखले भनिन्, ‘सदनको गरिमा हामीले नै राख्ने हो । कोही बाहिरको आएर राख्दैन । राहुल जी मेरा दुश्मन होइनन् । छोरा जस्तै छन्।’
केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले भने, ‘राहुल गान्धीले लोकसभामा चिपको आन्दोलन शुरू गरे ।’
लाेकसभामा राहुल गान्धीको चर्तिकला
१. म भाजपाप्रति आभारी छु : तपाई सोचिरहनु भएको होला, मेरो दिलमा प्रधानमन्त्री (मोदी) लाई लिएर रिस र घृणा मात्रै छ । तर, होइन, मरो मन भाजपा, प्रधानमन्त्री र आरएसएसप्रति कुनै रिस, घृणा केही छैन । उहाँले मलाई कांग्रेस र हिन्दुस्तानी हुनुको अर्थ सिकाउनु भयो । हिन्दुस्तानी हुनुको अर्थको बाहिर जे भएपनि मनमा माया तथा सहानुभुति हुनु पर्छ । तपाईले मेरो धर्म शिकाउनु भयो । हिन्दु हुनुको अर्थ बुझाउनु भयो ।
२. सबैलाई कांग्रेसमा भित्राउछु : तपाई भित्र मलाई लिएर घृणा छ, तपाईको नजरमा म ‘लाटो’ (पप्पु) हुँ । तर, मेरो मनमा तपाई लिएर कुनै रिस वा राग छैन । मैले एक–एक गरेर तपाईभित्र भएको माया बाहिर निकाल्छु र सबैलाई कांग्रेसमा भित्राउछु पनि ।
३. मोदी हाँस्दै राहुलको पिड्युमा धाप मारे : आफ्नो भाषण सकिएपछि राहुल एक्कासी आफ्नो सिटबाट उठे प्रधानमन्त्री मोदी बसेको ठाउँमा गएर गल्र्याम्म अंगाले हाले । राहुलले यसो गर्दा प्रधानमन्त्री मोदी एकछिन अचम्ममा पर्दै इशारामै यसरी अचानक आँउनुको कारण सोधे । फर्किनै लागेका राहुललाई मोदीले रोके । दुवैले हात मिलाए मोदी हाँस्दै राहुलको पिड्युमा धाप मारे । मुस्कुराउँदै फर्केका राहुलले सदनमा बिराजमान सबैलाई नमस्कार गर्दै एक फन्को मारे र आफ्नो सिटमा गएर बसे । लोकसेभाका सभामुखले हाउसको नियम सम्झाउँदै रोक्न खोजे तर, राहुल फेरि बोल्दै थिए ‘हिन्दु हुनुको मतलव अंगालो मार्नु हो…?’
४. राहुललार्इ भाजपाकाे बधार्इ : भाजपाका धेरै सांसदले मलाई बधाई दिनुभयो दिँदै धेरै राम्रो बोलेको भन्दै कमेन्ट गर्नु भयो । राहुलले प्रधानमन्त्री मोदीलाई अंगालो हालेकोमा अकाली दलका सांसद हरसिमरत कौरले अपत्ति जनाए । उनले ‘यो संसद हो कि मन्ना भाइका पप्पी–झप्पी एरिया रु’ प्रश्न उठाए ।
ट्याग्स: अविश्वास प्रस्ताव, भारतीय लाेकसभा